पूर्वराजाको चर्चा फेरि चुलिएर गएको छ । यो पंक्ति लेखुन्जेलसम्म भारतको उडिसा राज्यको जगन्नाथ पुरी मन्दिरमा शाही पूजा गरेका पूर्वराजाले पुरीस्थित जगतगुरु शंकराचार्य मठमा आयोजित कार्यक्रममा बिशिष्ट अतिथथिको रुपमा संवोधन गर्दै सनातन धर्मरक्षाका लागि सामुहिक प्रयास आवश्यक भएको कुरा बताएका छन् । अझ एउटा नेपाली निजी टीभी च्यानलले त पूर्वराजाले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रको रुपमा पुन:स्र्थापना गर्ने कार्य सुरु भइसकेको बताएको समाचार दिएको छ ।
एकथरि राजतन्त्रवादीहरु यी सब देखेपछि, सुनेपछि खुब खुशी छन् र सच्चा राजतन्त्रवादी न हुन्, तिनलाई पैसा पदको लोभ छैन । बस् राजतन्त्र आव फर्किन्छ, मुलुक बाँच्छ भन्ने आश मा नै तिनीहरु खुशी भएका हुन् । भारतमा पूर्वराजालाई गरिउको मान, सम्मान, उनीप्रति गरिएको संवोधन आदि देखेरै पनि ती राजतन्त्तवादीहरु हर्षले विभोर भएका छन् । तिनको मत छ, हिजो भारतले गल्ती गर्‍यो, अव सच्याउँदैछ । अर्थात हिजो राजतन्त्त फाल्न यहाँका कथित गणतन्त्रवादीहरुलाई भारतले नै मलजल गर्‍यो । तर अव, भारतले बुझ्यो कि नेपालमा राजतन्त्त आफ्नो लागि पनि आवश्यक रहेछ । भारतले बुझ्यो किराजतन्त्र बिनाको नेपाल आफ्नो लागि समेत खतरा छ भन्ने कुरा । यस्तो बुझाइ यो छ कि ती राजतन्त्रवादीरुको । यहाँका बिना पिँधका लोटासरीका राजनीतिक दलहरुको कुनै भर भएन । आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थका लागि जोसँग पनि जस्तोसुकै पनि सहमति, सम्झौता गरेर आफूलाई समेत अप्ठेयारोमा पारिदिने कार्य यहाँका दलहरुले गर्ने गरेको र उस्तै परे कार्यकर्ताहरुलाई आफू रिुद्ध सडकमा उतारेर नेपाली जनतावीच आफ्नो बारेमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गने माहिर यहाँका राजनीतिक दलहरुसँग अव भारत रुष्ट भएर पूर्वराजातिर लहसिएको पनि बताउँछन् ती राजतन्त्रवादीहरु ।
बाहिर बाहिर राष्ट्रभक्तको छाप छोड्ने, भित्र भित्र भारतको दलाली गर्ने यहाँका मै हुँ भन्ने नेताहरुसँग अव छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको विश्वास भएन । चीनसँग गरिएको सन्धिलाई कार्यान्वयन गरेर, केरुङसम्म आइपुग्ने चिनियाँ रेललाई लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने देखि लिएर यहाँका विमानस्थलहरु स्तरोन्नति सम्ममा चीन पसेको हाम्रो दक्षिणको मित्रलाई फिटिक्कै मन परेको छैन ।अ झ नेपालका झिनामसिना कामहरुमा समेत अहिले चिनियाँ र नागरिकहरुको सहज प्रवेश भइरहनु भारतको अर्को टाउको दुखाइको विषय भएको छ । नेपालीभन्दै केही हजार कार्यकर्ताहरुको बलमा बाहिर साखुल्ले भएर भित्र त्रि आफूविरुद्ध कैँची चलाउने यहाँका राजनीतिक दल र नेताहरुलाई अघि राजालाई विस्थापन गरेझैं गर्न नसेकता पनि अंकूश लगाउन जरुरी भएकाले अव भारत फेरि तीन पिलर सिस्टममा फर्कन चाहेको देखिन्छ ।
अझ धर्मनिरपेक्षताको नाममा भइरहेको कृस्तानीकरण अनि संघीयताको नाममा हुनसक्ने चिनियाँ र पश्चिमाहरुको चलखेलका कारण आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थामा पर्ने खलल कारण पनि अब भारत मन नै देखि यो व्यवस्था चाहदैन । ती एकथरिराजतन्त्रवादीहरुको बुझाइ हो यो । झन संविधान जारी नगर्न आफूले दिएको उचित सुझावलाई मसेत बेवास्ता गर्ने यहाँका राजनीतिक दलहरुबाट अभविष्यमा अझ ठूलो धोखा हुने लख हाम्रो छिमेकीमित्र भारतले काटिसकेको छ ।
त्यसकारण पनि अहिले पूर्वराजाको भारतमा भव्य स्वागत सत्कार भइरहेको छ । अझ हरेक विवादमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु मार्फत आफूलाई विवादमा पारिदिने यहाँका नेताहरुलाई तर नलगाइ पनि भाछैन । सीमा मिचिदादेखि भारतमा कुनै नेपाली कुटिदासम्म पनि नेपाली जनतामाझ सिंगो भारतकै नाम उछालेर नेपाली जनतासामु आफ्नो नामलाई बदनाम गराउने यहाँका कथित दलरुलाई ठिक नगरीभएको छैन भारतलाई । त्यसकारण पनि अघि सात सालमा राण विरुद्ध उत्रेका राजा त्रिभुवनलाई गरेझैं गर्न सहयोग गर्न यसपटक पनि जबरजस्ती, अवैधानिक रुपमा, विस्थापन गरिएको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पुनस्र्थापित गर्न भारतले मद्दत गर्न खोजेको देखिन्छ । सोझा देशभक्तहरुको विश्लेषण हो यो ।
तर अर्काथरि यस्ता राजतन्त्तवादीहरु घेटिए, जो माथिको विश्लेषसँग पुरै नए पनि केही न केही विमति चाहिं राख्छन् । पहिले त तिनीहरु भरत केसर मार्काहरको बुइृ चढ्नु नै पूर्वराजाको कमजोरी देख्छन् । समाजमा गनाएका अनि एजेन्सीहरुबाट सञ्चालितहरुले प्रायोजन गरेको उडिसा भ्रमण भनेको दुईदिने रमझम मात्र हो । फेरि त्यहाँ हिन्दुधर्मको मात्र पनस्र्थापनाको कुरा उठेको छ । राजतन्त्रको होइन । अझ भारतको सहयोगमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना
गर्ने ? पूर्वराजालाई घेरावन्दीकाहरुले त्यसरी नै बुझाएको देखिन्छ । पुरीका मठाधीशको औकात कत्रो छ ? हिजो पनि यस्ताहरुले राजतन्त्र विस्थापन गर्न आगोमा घ्यू थपेकै हुन् । आज पनि यिनले सकारात्मक भूमिका खेलिरहेका छैनन् । पूर्वराजालाई भारत पुर्‍याएर जोगी सन्यासीबाट हिन्दुराष्ट्रका लागि अघि बढ्न आदेश दिन लगाउने ? नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुन्छ, हुनुपर्छ तर नेपाली शक्तिको बलमा । नेपाली जनताको बलमा ।
ताकत भए हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रकै कुरा उठाउनुपथ्र्यो । पूर्वराजालाई हिन्दुसम्राट भन्ने, यत्तिमै थामथुम
पार्ने ? भारतले जे गर्छ, उसको स्वार्थका लागि गर्छ । हामीलाई हाम्रो देशको स्वार्थअनुकूलको वातावरण चाहिएको छ । भारतको लहैलहैमा लाग्दा के हुन्छ, अव पनि हामीले नचेत्ने ? पूर्वराजा तीर्थाटन गरुन्, तर जानुपर्ने नेपाली जनताका सामु नै हो । नेपालका सार्वभौम जनता पनि यही भनिरहेका छन् । जनताको साथ र सहयोग दिगो हुन्छ । छिमेकीले त नैतिक समर्थन गरिदिने हो, त्यसका लागि पहिले आफ्नो बल सम्मान आफैले आर्जन गर्नसक्नुपर्छ, त्यसपछि हो । जसरी पनि छरिएको जनसमर्थन एकीकृत र जर्न जागरुकतामा लाग्नु बेश हुनेछ ।
जनताको समर्थन भएपछि छिमेक त्यसै आउने वातावरण बनिहाल्छ । केही हजार जनतालाई उरालेर हाम्रा नेताले भारतलाई हायलकायल पार्न सक्छन् भने राजतन्त्रको जग र जरा त बलियै छ त । पूर्वराजाले अर्काको बुई चढ्ने होइन, जनताको हाई हाई हुनुपर्छ । बाँकी पूर्वराजा ज्ञानी छन्, नामै ज्ञानेन्द्र ।